Uhuuruu Keeniyaataan Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Chaayinaatti taasisu akka dhaabu gaafatan - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Xiyyaara Itoophiyaa 'Airbus A350-941' Buufata xiyyaaraa Idila Adunyaa Shaangaay Pudoongi Fulbaana 8 bara 2018.
Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaataan daandiin Qilleensa Itoophiyaa balalii gara Chaayinaatti taasisu akka dhaabuuf gaafatan.
Gaazexaan biyya Keeniyaa 'Daily Nation' jedhamu akka gabaasetti facaatii koroonaavaayirasiin gara biyyoota Afrikaatti taasisuumalu ittisuuf daandiin qilleensichaa balalii isaa dhaabuu qaba jechuuni Uhuuruu Keeniyaan kan gaafatan.
Koroonaavaayirasiin gara biyyoota Eeshiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaatti faca'aa jira.
Pirezidaanti Uhuuruun akka jedhanitti facaatiin vaayirasichaa Afrikaaf yaaddoo guddaadha. keessumaa biyyoota akka Keeniyaa sirna to'annaa fayyaa dadhabaa qabaniif jedhan.
Sodaan keenya akka biyyaatti Chaayinaan facaatii vaayirasichaa to'achuu hin dandeessu kan jedhu miti.
Sodaan keenya inni guddaan biyyoota sirna to'annaa fayyaa dadhabaa qaban akka biyya keenyaa ilaalchiseeti jechuun soda isaanii ibsan Uhuuruu Keeniyaataan.
Kooroonaavaayiras fayyaa addunyaaf yaaddessaa jedhamuun labsame
'Ameerikaan sodaa Koroonaavaayiras babal'isaa jirti' - Chaayinaa
Pirezidaantichi kana kan dubbatan erga daandiin Qilleensa Itoophiyaa balalii isaa gara Chaayinaatti taasisu akka itti fufu ibseeti. Daandiin qilleensichaa Chaayinaa keessaa bakkeewwan gahumsa shank an qabu yoo tahu gara Shaangaay,Beejiingi, Guwaangizhu, Chenduu fi Hoongi Koongitti balali'a.
Hojii Gaggeessaa Olaanaan Daandii Qilleensa Itoophiyaa Obbo Tawoldee G/Maarimaayam kaleessa ibsa FBC'f kennaniin Chaayinaatti balali'u dhaabuun dhukkubicha Itoophiyaatti akka hin dhufne ittisuu jechuu miti jedhan.
Daandiin Qilleensa Itoophiyaa Chaayinaa Afrikaa waliin kan wal qunnamsiisu yoo ta'u torbanitti si'a 35 balali'a.
Namoonni lameen kunneen Chaayinaa fi Arjantiinaarraa kan dhufan yoo ta'an garuu guyyaa adda addaatti Chaayinaarraa gara Gaanaa imalan.
Namoonni kunneen jalqaba mana yaalaa dhuunfaa seenanii yaalamanii turan, achiis ba'uun Hospitaala magaalaa Akiraatti argamu kutaa wal'aansa hatattamaa seenuun hordofamaa jiru.
Kooroonaavaayiras fayyaa addunyaaf yaaddessaa jechuun DhFA labse
31 Amajjii 2020
Ameerikaan sodaa Koroonaavaayiras babal'isaa jirti jechuun Chaayinaan komatte
KoroonaaVaayiras: Hospitaala guyyoota keesssatti ijaaramu
2 Guraandhala 2020